यो साता धनवान बन्दै यो ५ राशि, कुन राशिलाइ कस्तो ? | सुदुरपश्चिम खबर
यो साता धनवान बन्दै यो ५ राशि, कुन राशिलाइ कस्तो ?
मिति २०७७ साल चैत्र १५ गते आइतबार देखि २१ गते शनिबारसम्मको साप्ताहिक राशिफल । यो साता १५ गते आइतबार फागु पूर्णिमा पर्व (हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा सार्बजनिक बिदा । १६ गते तराईमा बिदा । १८ गते नाला मत्स्येन्द्रनाथ रथयात्रा, १९ गते विश्व मूर्ख दिवस । परेको छन् । यो साता धेरै राशिका लागि धनवान हुने योग परेको छ । तपाइले पनि आफ्नो ग्रहफल हेरेर फाइदा लिन सक्नुहुनेछ।
साथीभाइसँग मनोरञ्जन गर्दा दैनिक कार्यहरू ओझेलमा पर्न सक्छन्। मन मिल्नेहरूले मुख्य समस्याको गाँठो फुकाउन सहयोग गर्नेछन् । खानपान तथा विलासितातर्फ संयम रहनु नै बेस होला। वनभोजमा घुम्न जाने मित्रहरूको प्रस्ताव स्विकार्दा अविस्मरणीय क्षण बन्नेछ । साताको अन्त्यमा आर्थिक भार महसुस हुन गई सापटीको चपेटामा पर्न सकिन्छ।
लामो तथा छोटो दूरीको यात्रामा थप खर्चले पिरोल्नेछ । राजनीतिक परिवर्तनकारी भूमिकामा नेतृत्व गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आइलाग्नेछ । पारिवारिक सुख–सुविधाका निम्ति विलासिताका सामग्री खरिद गर्न खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । धनागमनमा रहेका चुनौतीहरू यथास्थितिमै रहनेछन् । स्वास्थ्यप्रति हेक्का राख्नुहोला।
बोलीको प्रभावले बिग्रन लागेको सम्बन्धलाई मल्हम लगाउन सहयोग गर्नेछ। प्रशंसा गर्नेहरूले भित्रभित्रै आलोचना गर्न सक्छन्, होसियारी हुनुमा नै आफ्नो कल्याण हुनेछ। हरियो रंगको प्रभावले सहजता महसुस गराउनेछ । यो साता इष्टमित्रको मांगलिक कार्यमा सहभागी भइनेछ।
कला तथा साहित्यद्वारा अरूलाई प्रभाव पार्न सकिनेछ । हठ गर्ने बानीले पारिवारिक मनमुटाव देखा पर्न सक्छ । ढिलै भए पनि सही मार्ग पहिल्याइनेछ । खरानी रंगको सवारी साधन खरिद गर्न आकर्षित भइनेछ । पश्चिमतर्फको यात्रा फलदायी सावित हुनेछ।
बलमिच्याइँले गरेका कार्यमा विवाद आइलाग्ला । अभिभावकको रुचिको ख्याल गर्दा आर्थिक नोक्सानी आइलाग्नेछैन। सहपाठीको सुझावमुताविक विदेश अध्ययनको मौका जुर्न सक्छ । कार्य सम्पन्न गर्न ढिलाइ नगर्नुहोला । यो साता पूर्वतर्फको यात्रा फलदायी सावित हुनेछ।
मेहनतले जीवनशैलीमा परिर्वतन ल्याउन सक्छ। सहयोगीहरूले समस्या समाधानको बाटो देखाइदिँदा गुमिसकेको स्थान पुनस् प्राप्त हुन सक्छ । अध्ययनका लागि विदेश जाने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। शंकास्पद व्यवहारले प्रेमिका चिढिन सक्छिन्। नीलो रंगको पहिरनले उन्नतिको मार्ग पहिल्याउन सहज हुनेछ।
मनका भावना आदानप्रदान गर्ने मित्र भेटिन केही समय कुर्नुपर्नेछ । प्रसंगवश मन पराएको अभिलाषासमेत व्यक्त गर्न सक्छन् । पारिवारिक मतको अनुमोदनले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । रोकिएका कार्य सम्पन्न भई आर्थिक संकटको समस्या स्वतस् समाधान हुनेछ। नयाँ व्यवसायमा लगानी गर्ने प्रस्ताव आइलाग्न सक्छ।
आफूभित्र उत्पन्न हुने चञ्चलताप्रति संयमित रहनुहोला। सुनौलो रंग तथा तरल पदार्थको कारोबार फाप्ने देखिन्छ। मन मिल्नेबीच ठाकठुक पर्न सक्छ, कम बोल्दा आफ्नो हितमा हुनेछ। साथीभाइको सुझावमुताविक व्यवसाय परिवर्तन गर्ने संयोग परेको छ।
जीवनचर्या परिवर्तन गर्दा सफलताको मार्ग सहज हुने देखिन्छ । मन मिल्ने साथीले दिएको सुझाव मनन गरी चल्न सके आफूलाई प्रशस्त फाइदा हुनेछ। घरायसी व्यवहारमा समय नदिँदा पारिवारिक गुनासो बढ्नेछ । रोजगारीका निम्ति वैदेशिक यात्रा नजिकिँदो छ।
सेतो पहिरनमा प्रस्तुत हुन सके अरूको नजर आफूमाथि पर्नेछ। पारिवारिक सल्लाहमा अन्योल देखा पर्दा तपाईंको ठोस प्रस्ताव नै निर्णायक हुनेछ। खानपान फेरबदल भई शारीरिक दुर्बलता देखा पर्न सक्छ, योग अभ्यास तथा तातोपानी बढी पिउनाले प्रायस् समस्याबाट मुक्ति मिल्नेछ।
धार्मिक यात्राले नयाँ स्थानहरूको मनोरञ्जन दिलाउनेछ। स्वास्थ्यमा सामान्य गडबडी देखा पर्न सक्छ, विचार पु¥याउनुहोला। मंगलबार तथा बिहीबार महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुनेछन्। विदेशी साथीहरूले नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव राख्नेछन्, निर्णय गर्न ढिलो नगर्नुहोला। भोज–भतेर तथा खानपानमा सहभागी हुँदा समयको ख्याल गर्नुहोला। (gnewsnepal बाट सभार)
रङहरुको पर्व होली आज हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा मनाइदै !!
सुदुरपश्चिम मोबाइल ब्यवसायी संघ धनगढी द्धारा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेशनलाई आर्थिक सहयोग !!